Thursday February 13, 2020 - 14:55:52 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Dowladda Mareykanka ayaa maalintii shalay shaaca ka qaaday iney soo celineyso gunnooyinkii ay siin jirtay ciidamada DF, oo markii hore uga goosatay musuqmaasuq lagu sameyn jiray dhaqaalahaasi.
War kasoo baxaya safaaradda Mareykanka uu ku leeyahay Xalane ayaa lagu sheegay in tallaabadan ay timid kadib markii la xaqiijiyay arrinta musuqa lana ogaaday in xilligan lagu kalsoonaan karo dowladda uu hogaamiyo Farmaajo laakin ay hor yaallaan shuruudo badan oo u eg "Xalwadaad cuntay bood-boodkeeda ayaa lagaa rabaa"!
Ryan Grizzle, oo ah Afhayeen u hadlay safaaradda ayaa yiri "Waxaan ugu baaqaynaa Dowladda soomaaliya in ay mudnaanta koowaad siiso wax ka beddelka iyo tayaynta hay’adaha amniga, si loo helo ciidamo awood u leh in ay amaanka la wareegaan.”
Madaxweynaha DF waxaa la amray inuu sida ugu dhaqsiyaha badan safaaradda Mareykanka ku gaarsiiyo liiska dhabta ah ee ciidamada dowladda, si loogu qoondeeyo lacagaha la siinayo.
Farmaajo iyo Kheyrre oo ay farxad badan ka muuqato ayaa mar qura shalay u tagay saraakiisha ciidanka iyagoo kasoo qaatay liisaska tira koobka ciidamada. tan ayaa ka dhigan in DFS, ay dhanka beesha caalamka ka noqotay dowlad aamin ah oo shaqadii loo diro sideeda u qabanaysa.
Dhinaca kale wasaaradda difaaca Mareykanka ayaa sheegtay in ciidamada dowladda Federaalka Soomaaliya aysan laheyn awood ay isaga difaacaan Al Shabaab marka ay ciidamada AMISOM isaga baxaan dalka sanadda 2021.
DFS oo Kaalinta Kowaad Ka Gashay Musuqmaasuqa Caalamka!
Hay’adda Transparency International, waxay bishii lasoo dhaafay 23-keedii soo saartay warbixin ay ku sheegtay in DFS ay gashay kaalinta koowaad ee musuqa dowladaha caalamka, kadib baaritaano la sameeyay.
Madaxda dowladda ma aanay dafirin base murugo iyo niyad jab ayay ka muujiyeen Sidoo kale dowladaha tabantaabiya maamulka Farmaajo ayaanan beenin warbixintaas, waxaana iyadoo ay sidaa tahay uu Mareykanku sheegay inuu muddo 21 maalmood gudahood ku xaqiiqsaday in dowladda la aamini karo! Xaaladdu waxay mareysaa in sidii caruurtii oo kale loogu ciyaaro dowladda.
Dhaqaalaha uu Mareykanku siin jiray ciidamada waa mid aad u yar marka loo eego dhaqaalaha ay dowladdu bil walba ka hesho Dekedda Xamar iyo canshuurta bulshada Muqdisho, sidaa darteed ayaa tan iyo shalay dadku iska dhex marayeen sabab ay lacagtaas yar Farmaajo iyo Kheyrre uga farxisay.
Siyaasiyiintu waxay sheegayaan in labada mas’uul aaney ku farxin lacagta yar, balse ay ku hiyi kaceen ammaanta Mareykanka oo ay ka aaminsan yihiin sharaf weyn oo usoo hoyatay, laakin Sharaf iyo cizi waxaa leh Allaah Subxaanahu Watacaalaa.